Ogaden News Agency (ONA) – Sawirro iyo Warbixin: Shir sanadeedka OYSU ee Qaarada Europe oo kasocda Salo Finland
Sawirro iyo Warbixin: Shir sanadeedka OYSU ee Qaarada Europe oo kasocda Salo Finland
Posted by ONA Admin	/ July 16, 2012
Ururka OYSU qaarada Europé ayaa 15/7/2012 isugu yimid kulanweynihii ururka magaalada Salo ee dalka Finland. Waxuuna shirku si caadi ah u furmay maalinimadii labaad 9 Aroornimo ee 16 July 2012.
Shirka oo ahaa mid si heer sare ah loosoo aggaasimay ayaa waxaa martisharafta shirka kusoo dhaweeyay Gudoomiyaha Jaaliyada dalka Finland Mudane Maxamed Digaale oo gacmo furan kusoo dhaweeyay dhamaan marti sharafta dhalinta OYSU ee qaarada Europe isaga kala yimid si ay shirweynaha ururka OYSU ee heer qaaradeed uga qeyb galaan. Waxa uu Gudomiyuhu sido kale aad ugu mahad naqay Madaxda Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya isaga oo kusoo dhaweeyay shirka Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO si uu u furo shirka dhalinta OYSU.
Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO Dr Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maaday) oo hoggaaminaya wafti heer sare ah oo ka socda hoggaanka sare ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa dhalinta aad ugu boggaadiyay halganka xoogan ee ay ku jiraan kuna garab taaganyihiin qadiyadooda Ogadeniya. Waxa kale oo uu aad u amaanay Jaaliyada Finland ee marti galisay shirka dhalinta OYSU isaga oo mahad naq balaadhan u diray Ururka OYSU Finland iyo guud ahaan Jaaliyada. Hadalo kooban kadib Hoggaanku waxa uu daahfuray shirka dhalinta OYSU Qaarada Europe 2012.
Mudane Gama’diid ku xigeenka hogaanka HAAB ayaa isna dhalinta kulankooda kala qayb qaadanayay oo isna u mahad celiyay dhalinta kuna dhiira galiyay inay laba jibaaraan dadaalka ay wadaan ee ay ugu jiraan shacabkooda dulman ee S/Ogadenia.
Kadib waxaa la galay soo bandhigidii warbixinada wadamada qaarada Yurub ee OYSU, Maadaama ujeedada kulanka la isugu yimid uu ahaa qiimayn lagu qiimaynayay wax qabadkii urur hoosaadyada OYSU ee qarada Europé & walibana siminaaro aqoon korarsi lagu kobcinayay garaadka & aqoonta dhalinta. Qeybtii hore ee Shirka ayaa waxaa xidhiidhinayay Xoghayaha Jaaliyada Finland Mudane Cabdullahi Shukri.
Xoghaya guud ee OYSU Mudane mujaahid Sh. Ibraahin Cabdale ayaa soo jeediyay barnaamij loogu magac daray sooyaalka taariikhda oo aad loowada jeclaystay xiisad badana xambaarsanaa, waayo waxay taabanayeen wax yaalo badan oo soo jiidanayay dhagaha dhalinta. Mudane Mujaahid oo ah hogaamiye daacada, misna u fuliya hawlihiisa si hufan ayaa dhalinta aad ugu booriyay kuna adkeeyay inay dhan ka ahaadaan wax allaala waxii lid ku noqon karaya arimaha halganka.
Illaalinta Iyo Horumarinta Hiddaha Iyo Dhaqanka Ogadeniya
Dr Abdirahman Sh Mahdi sidoo kale waxuu kasoo jeediyay asagana siminaar ku saabsanaa ilaalinta hormarinta hidaha & dhaqanka Ogadenia. Hogaanku waxuu dhalinta ku guubaabiyay inay u diyaar garoobaan kuna tala galaan inay tagaan dhulkoodii hooyo oo ay la qayb sadaan shacabka Ogadeniya marxaladaha ay ku sugan yihiin, maadaama ay dhalintu tahay kuwa laga sugayo xornimada Ogadenia. Sidoo kale waxuu faray inay maal-galin usameeyaan dhulkooda hooyo tusaale ahaana ay sameeyaan wax yaalaha ay ka midka yihiin farshaxanka, inay is dhex galka ururada kale badiyaan, sidoo kale waxuu ku dhiira galiyay kuna bogaadiyay hawlaha dhalintu ay halganka u qabataan inay yihiin hawlo aad u wanaagsan siina laba jibaaraan .
Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO ayaa siminaarkisa uga faa ideystay innuu dhalinta lawadaago oo uu dhalinta uga waramay Xogag ku aadan Halganka Ogadeniya iyo qorshayaashii ugu danbeyay ee Ururka JWXO oo ahaa arrimo aad loogu bogay oo dhalintu aad usoo dhaweyeen.
Qabyaalada iyo Qadiyada Farqiga u dhaxeya!
Gabagabadii siminaaradii maanta ayaa ahaa, siminaaro aad loo jeclaystay waxaana kamid ahaa siminaar ay soo jeediyeen halgamayaasha kala ah Leyla Hassan & Hassan Nuur oo ayagana soo bandhigay qabyaalada & qadiyada farqiga u dhaxeeya. Siminaarkan oo si cilmiyaysan loo soo bandhigay ayaa waxa aad loogaga digay qabyaalada xumaanta ay leedahay iyo burburka ay ku keento halganka.
Sikastaba ha ahaatee dhalinta ayaa arintaas aad uga dooday kuna gaba gabeeysay guul & hufnaan, is afgarad wanaagsan & inay ka madax banaan yihiin qabyaalada & wax walboo hor seedi kara kala qaybsanaanta.
Isku soo wada duuduuboo waxaa kaloo goobta shirka ku sugnaa fanaaniinta qaranka S/Ogadenia halgame Yusuf Yare, Yusuf Cabdi & walibana Nimca Jibaax oo heesa qiira badan oo wadaniya shirka ka qaadayay, dhanka kalana dhalinta OYSU ayaa dad weynihii usoo diyaariyay riwaayad qiima badan laguna xusayay sanad guuradii OYSU.
Kala soco wararka dambe wakaalada ONA.
Ilwad Ali iyo Abdirahman Jarari